မော်လမြိုင်တွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှု​ကြောင့် လူနေရပ်ကွက်အချို့ရေနစ်မြုပ် - Myanmar Pressphoto Agency
MPA July 25, 2021 1 min read
မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့တွင် တစ်ပတ်ခန့်အကြာ မိုးသည်းထန်စွာ ဆက်တိုက်ရွာသွန်းမှုများ ကြောင့် ယနေ့ ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် မော်လမြိုင်မြို့ လူနေရပ်ကွက်အချို့ ရေနစ်မြုပ်မှု ဖြစ်ပေါ်နေ ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်ပေါ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ သံလွင်မြစ်ဒီရေအတက်အကျကြောင့် ရေတက်လာခြင်း ဖြစ်ကြောင်း မော်လမြိုင်မြို့ လူမှုကယ်ဆယ်ရေး အသင်း(Mawlamyine Rescue) က တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက MPAသို့ပြောသည်။
” ရေကြီးတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။ ဒီနေ့က ကျွန်တော်တို့ မော်လမြိုင်မြို့အနေအထားအရ လပြည့်ကျော် ၁ရက် ၂ရက်ဆိုတော့ တက်ရေရှိတယ်။ ဒီရေတက်တဲ့အချိန်နဲ့ မိုးကလည်း တစ်ပတ်နီးပါးဆက် တိုက်ရွာနေတာနဲ့ ပေါင်းပြီး ရပ်ကွက်တွေထဲ ရေဝင်တာပေါ့။ အရင်လိုရေကြီးရေလျှံတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ မိုးတိတ်သွားရင် ပြန်ကျသွားမယ့်ရေမျိုးပါ။” ၎င်းက ဆိုသည်။
ယင်းသို့ မြစ်ရေတက်လာသဖြင့် မော်လမြိုင်မြို့ ပန်းဘဲတန်းရပ်ကွက်၊ သာယာကုန်းရပ်ကွက်၊ ရွှေ တောင်ရပ်ကွက် အပါအဝင် ရပ်ကွက် ငါးခုခန့် ရေနစ်မြုပ်နေကြောင်းသိရပြီး ရေကြီးရေလျှံခြင်းမဟုတ်သဖြင့် ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများလည်း ဖွင့်လှစ်ရန်မလိုကြောင်း ၎င်းက ဆက် လက်ပြောဆိုသည်။
မော်လမြိုင်မြို့သည် ယခင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် မိုးသည်း ထန်စွာဆက်တိုက်ရွာသွန်းခဲ့မှုကြောင့် ကျိုက်သလ္လန်ဘုရားကမ်းပါးယံများ ပြိုကျခဲ့ပြီး ၁၀ရက်နီးပါး ရေကြီးရေလျှံခဲ့သဖြင့် လူဦးရေ ထောင်နှင့်ချီရေဘေးသင့်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
#မော်လမြိုင် #ရေနစ်မြုပ် #မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်း#MPA
Some Neighborhoods Flooded from Heavy Rain in Mawlamyine
Due to heavy rain foraweek in Mawlamyine of Mon State, some neighborhoods have sunk in the flood today, July 25.
It was not because of the flood from the rain but from the tide rise and fall of Than Lwin river, saidaMawlamyine Rescue official to MPA.
“It wasn’taflood. According to Mawlamyine location, today is justaday or two past the full moon, so there’satide rising and falling. While the tide was up, it was added up byaweek’s rain and waters came into neighborhoods. It wasn’t like floods before. It’ll go away when the rain stops,” he said.
As the sudden flood occurred, Papel Tan, Thar Yae Kone and about five neighborhoods including Shwe Taung neighborhood were sunk in the waters. But no rescue centers need to be opened as it isn’taflood, he continued.
In 2018, there wasaflood in Mawlamyine due to heavy rain and the banks of Kyaik Thanlan pagoda were damaged. A nearly ten-day long flood displaced thousands as flood victims.
Tags: disaster Flood Mawlamyine MPA Myanmar News
Previous: တိုက်ကြီး၊ သပြုရွာကို ညသန်းခေါင် စစ်သားများ ဝင်စီးပြီး ရွာသားတချို့ကို ဖမ်းဆီး
Next: အကြမ်းဖက်စစ်တပ် အာဏာသိမ်းပြီးနောက် စစ်သားသစ်စုဆောင်းမှုကို ပညာအရည်အချင်း ၄ တန်းအောင်ထိ လျှော့ချ